Madaxwayne dal soo maray wuxuu leeyahay MAQAAM ay tahay inuu laftiisu garto! | Hadalsame Media
Home Maqaallada Madaxwayne dal soo maray wuxuu leeyahay MAQAAM ay tahay inuu laftiisu garto!
Madaxwayne dal soo maray wuxuu leeyahay MAQAAM ay tahay inuu laftiisu garto!
(Hadalsame) 24 Sebt 2019 – Haddiiba dowladdu mammuucday ka qaybgalka madaxweynaha xoogga isku doortay isagoo Keenyaatiga kaashanaya, misana is caleemo saaraya, majirto sabab uu Madaxweyne Sheekh Shariif kaligii xaq ugu yeesho inuu ka qaybgalo, ma maadaama uu madaxwayne soo ahaabaa? Sawta inta kale loo diiday maaha? Mise sharcigaa inta taagta yar qabta?
Ma taallo meesha sabab loo bartilmaameedsanayo Sheekh Shariif’e, waxa meesha yaalla go’aan dowladeed oo ay tahay inuu u hoggaansamo madaxweynuhu.
Midda kale madaxweynuhu meeqaamkiisii maaha, waana ku sharaf dhac inuu u hanqaltaago ka qaybgalka xafladda Axmed M. Islaan uu abaabushay, isagoo og in uu garabsanayo dowlad shisheeye oo duullaan ku ah madaxbanaannida qaranka, boobaysa dhulkeenna, una adeegsanaysa Axmed Madoobe si ay curyaamiso dowladnimada Soomaaliya, oo ay u hanato dhul kheyraadkeenna ay usoo tafaxaydatay. Ma Soomaaliya jaceyl bay u taageereysaa Keenya Axmed Madoobe?
Keenya waxa ay u baahantahay inay ogaato, in aanu Axmed Madoobe u xalaaleyn karin dhulkayaga, Axmed Madoobena waxa uu u baahan yahay inuu ogaado, in aanu taageerada iyo cududda Keenya ku ahaan karin madaxwaynaha Jubbaland, balse ka raali ahaanshaha iyo taageerada muwaadiniinta soomaaliyeed oo qudha ay u wax goyso.
Previous article”Is taataabta!” – Barnaamij anshax xumo oo loo dhigayo carruurta 6-jirka ah oo laga bilaabay Ingiriiska & waalidiinta oo ka caraysan
Next articleMessi & Ronaldo oo codayntooda ku muujiyay sida ay isu arkaan! (Arag sida u codeeyeen)